Ixesha kunye nabahlobo 18
Ilungelo lokushicilela, i-1909, nguHW PERCIVAL.
Ukuba i-astral intelligences iyakwazi ukubona ngento, kutheni ukuba akukho mlawuli womoya ophakathi okwazi ukuhlangabezana novavanyo oluqhelekileyo lokubala i-orange?
Lo mbuzo ubhekisa kuvavanyo apho i-Psychical Research Society ibeke izifundo zayo. Kuyatshiwo ukuba inikezele ngesixa semali engamawaka amahlanu eedola kuye nawuphi na ophakathi onokuthi axelele inani elichanekileyo leorenji njengoko ethulula engxoweni ebekwa ebhasikithini okanye kwinto efana nale ibekwe ukuba ayifumane.
Ukuza kuthi ga ngoku akukho mntu wakwazi ukuqagela okanye uxele inani elichanekileyo leorenji etafileni okanye ebhaskithini, nangona uninzi luzamile.
Ukuba impendulo ichanekile, kufuneka inikezwe ngokobukrelekrele okanye ngokwengqondi elawula ophakathi. Ukuba ubukrelekrele obuphakathi babenokukwazi ukusombulula ingxaki bekungayi kubakho mfuneko yolawulo; kodwa akukho kwaphakathi okanye kulawulo kuyeyisombulula ingxaki. Ingxaki ayibandakanyi ukukwazi ukubona ngombandela, kodwa ukubala amanani. Zombini eziphakathi kunye nolawulo zinokubona ngombandela, njengomntwana unokujonga kwiglasi ukubona abantu bedlula kwelinye icala lesitrato. Kodwa ukuba umntwana akafundanga ukusebenza kwengqondo kokubala, ngekhe akwazi ukubalisela inani eliphambi kwefestile nangaliphi na ixesha elinikiweyo. Ifuna ingqondo eqeqeshekileyo ukubala ukuze ikwazi ukongeza ngokukhawuleza ikholamu enkulu yamanani, kwaye isekuqeqeshelwe ngakumbi kufuneka ibe yingqondo ekwaziyo ukuba zingaphi iingqekembe ezikhoyo kwiqela okanye bangaphi abantu kwisihlwele.
Njengomthetho, indlela yokucinga ngeemeko ezingezizo ezodidi oluphezulu, kwaye ulawulo lweesystems lungaphantsi komndilili wabantu abaqhelekileyo. I-clairvoyant okanye ulawulo lwendlela inokuthi, njengomntwana okwilayibrari, igalari yobugcisa okanye igadi yeentyatyambo, ibone izinto ezikulo. Njengomntwana ulawulo lwaphakathi okanye lwe-clairvoyant unokuthetha ngeencwadi ezingaqhelekanga kwiimeko zazo ezixabisekileyo, okanye ngamacangci amangalisayo obugcisa, kunye neentyatyambo ezintle, kodwa uya kuba kwilahleko eyoyikekayo yokujongana nomcimbi wesi Iincwadi, ukugxeka nokuchaza ubuncwane bobugcisa okanye ukuthetha ngeentyatyambo ngamanye amagama ngaphandle kokuchaza. Isakhono sokubona ngombandela asiquki umthamo wokwazi okubonakalayo.
Impendulo ethe ngqo kumbuzo wokuba kutheni kungekho mntu uphakathi oye wakwazi ukufumana olu vavanyo yile: kuba akukho mntu ungumntu oqeqeshe ingqondo yakhe ukuba ikwazi ukubala nje kancinci iiyunithi ezenza inani elikhulu. Kungenxa yoko le nto iphakathi alikwazi ukucacisa inani lee-orenji ezingxoweni enkulu okanye ezibhasikithini. "Ukulawulwa komoya" akusazi nto, apho imisebenzi yengqondo ichaphazelekayo, kunokuba ingqondo yolawulo isazi ngalo naliphi na ixesha xa yayingumgaqo wokwazisa umntu.
Ukuba omnye wababekhona wakwazi ukwenza umsebenzi wengqondo wokubala inamba kwaye ubambe inamba engqondweni yakhe, nokuba lolulawulo okanye oluphakathi uya kukwazi ukunika impendulo. Kodwa ngenxa yokuba kungekho namnye kwengqondo okhoyo onokuyenza le nto, ulawulo alunakukwenza. Akukho lawulo lwalo naluphi na uhlobo lwangaphakathi luyakwazi ukwenza umsebenzi wengqondo ongazange wenziwe ngabantu.
Yiyiphi inkcazo inokuthi i-Theosophy inikezela ukuzamazama komhlaba okunokuthi kwenzeke njalo, kwaye kukuphi na ukutshabalalisa amawaka abantu?
Ngokuka Theosophy zonke izinto kwindalo zinxulumene. Amadoda, izityalo, izilwanyana, amanzi, umoya, umhlaba nazo zonke izinto zisebenza kwaye zisabela kwenye. Imizimba ethe kratya iqhutywa yimizimba ecekeceke, imizimba engenangqondo iqhutywa bubukrelekrele, kwaye yonke imicimbi ijikeleza kuyo yonke imimandla yendalo. Yonke intlekele njengempembelelo ifanele ukuba ibangelwe sisizathu. Zonke izinto eziye zangenelwa ziziphumo ezilungileyo okanye ezibi ziziphumo kunye neziphumo zeengcinga zomntu.
Iingcamango zabantu zijikeleze okanye zinyuka kwaye zibumba ngokwamaqela okanye amafu njengoko zaziphezulu kwaye zijikeleze abantu, kwaye ilifu lokucinga lilolohlobo lwabantu abaludalayo. Ingcinga nganye yomntu ngamnye yongeza kwinani elipheleleyo leengcinga ezimiswe ngaphezulu kwabantu. Ke ilizwe ngalinye lilele kulo kwaye malunga nalo iingcinga kunye nohlobo lwabantu abahlala emhlabeni. Njengoko umoya wasemhlabeni unamandla adlala kuwo achaphazela umhlaba, ngokunjalo nengqondo yamafu yeengcinga ichaphazela nomhlaba. Njengoko izinto eziphikisanayo esibhakabhakeni, ziphumela kwaye zifumana umoya wazo xa kukho isaqhwithi, ngoko iingcinga ezingqubanayo kwimeko yengqondo kufuneka zifumane inkcazo yazo ngokwenzeka komzimba kunye neziganeko ezinje ngohlobo lweengcinga.
Umoya ojikeleze umhlaba kunye nomoya wengqondo wamadoda usabela kumandla omhlaba. Kukho ukujikeleza kwemikhosi ngaphakathi nangaphandle komhlaba; la mandla kunye nezenzo zawo kulo naliphi na icandelo lomhlaba elihambelana nemithetho jikelele elawula umhlaba uphela. Njengoko ubuhlanga babantu buvela, bukhula kwaye bubola kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba, kwaye njengomhlaba, nawo, kufuneka uguqule ubume bawo ekuhambeni kweminyaka, utshintsho olufunekayo kuphuhliso ngokubanzi kufuneka luziswe, lubangele utshintsho lwe ukutyekela kwe-axis yomhlaba kunye nokudalwa komhlaba.
Inyikima ibangelwa ngumzamo, ngomzamo womhlaba ukuze uzilungelelanise ngokwawo kunye namandla ayichaphazelayo kwaye ulingane kwaye uzilungelelanise ngokwayo kwiinguqu zayo. Xa inani elikhulu labantu litshabalaliswa yinyikima oko kuthetha ukuba kungekuphela nje ukuba umhlaba uhlengahlengiso ngokwecebo lokuma komhlaba, kodwa uninzi lwabantu ababhubhayo baye bahlangabezana nalo ngale ndlela ngenxa yezizathu abanazo. yaphuhliswa.